‘लुट’का निर्माता : छापाखानालाई पैसा छाप्ने आदेश दिन्थे, कर्मचारीमार्फत बजार पठाउँथे ! | Citizen FM 97.5 Mhz
Home > समाचार > ‘लुट’का निर्माता : छापाखानालाई पैसा छाप्ने आदेश दिन्थे, कर्मचारीमार्फत बजार पठाउँथे !
जेठ २, ‘हाकु काले’को समूहले बैंक लुटेसँगै कहानी अन्त्य भएको फिल्म हो ‘लुट’ । नेपाली सिने जगतमा नयाँ ट्रेन्ड स्थापित गर्न सफल त्यहि लुटका निर्माता माधवराज वाग्लेसहित उनको समूह बुधबार २ करोड ६० लाख ६३ हजार नक्कली नेपाली रुपैयाँसहित पक्राउ परेको छ ।
मंगलबार काठमाडौं महानगरपालिका–२६ मित्रनगरस्थित सुमधुर क्याफेमा वाग्लेको प्रिन्सेस मूभिजका कार्मचारी खाजा खान छिरेका थिए । खाजा बापत उनले तिरेको पैसा नक्कली भएको आशंकामा खाजा घरका सञ्चालक महानगरीय प्रहरी प्रभाग गोंगबु पुगेपछि फिल्म निर्माताको नक्कली नोट छाप्ने धन्दा बाहिरिएको हो ।‘महेन्द्र बोगटीलाई खानतलासी गर्दा उनको साथबाट १ लाख २० हजार नक्कली रुपैयाँ बरामद भयो’ महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख (एसएसपी) विश्वराज पोखरेलले भने, ‘फिल्म निर्माता माधवराज वाग्लेले काठमाडौंका भोलेबाबा र नवज्योती प्रिन्टिङ प्रेसमा यसरी नक्कली रुपैयाँ छाप्न दिएको खुल्न आएको छ ।’
महानगरीय प्रहरी प्रभाग गोंगबुका इन्सपेक्टर प्रताप पौडेलको कमाण्डमा खटिएको टोलीले लुटका निर्माता वाग्लेसहित ६ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । पक्राउ पर्नेहरुमा सिन्धुलीका सुजित तामाङ, साजन तामाङ, प्रकाश सुवेदी, महेन्द्र बोगटी र विकेश नापित रहेका छन् । महेन्द्र बोगटीको सूचनाको आधारमा प्रहरीले सिन्धुली स्थायी घर भएर ललितपुर बस्दै आएका २४ वर्षीय सुजित तामाङ र १९ वर्षीय साजन तामाङलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । निजहरुको कोठा खानतलासी गर्दा ७ लाख ४३ हजार नक्कली रुपैयाँ बरामद भएको एसएसपी पोखरेलले बताएका छन् ।
वाग्लेका कर्मचारीहरुले सक्कली रुपैयाँमा मिसाएर, होटल रेष्टुरेण्टमा, लागु औषध कारोबारी र यौनकर्मीहरुमार्फत नक्कली रुपैयाँ बजार पठाउने गरेको काठमाडौं प्रहरीले जनाएको छ । वाग्लले उक्त नक्कली रुपैयाँ ‘फिल्म निर्माणको प्रायोजनार्थ’ छाप्न लगाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रहरीका अनुसार वाग्लेले बागबजारमा रहेको नवज्योती प्रिन्टिङ प्रेस र भोलेबाबा प्रिन्टिङ प्रेसका सञ्चालकलाई छाप्न दिएका थिए । छापाखानाबाट प्रहरीले नक्कली नोट छाप्ने ८ थान मेटल प्लेटसहित प्रेस सञ्चालकलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको छ । यसरी नक्कली नोट छाप्नेलाई बिगो बमोजिम जरिवाना र १० बर्ष कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
गायक कृष्ण काफ्लेको गीत सुने पछि गायक तथा मोडल डि.आर सुजन बेहोस ,पर्यो ब्रजपात (भिडियो सहित हेर्नुहोस)
पार्टी एकता घोषणा गर्न एमाले र माओवादी सहमत, कम्युनिस्ट पार्टी ४४१ सदस्यीय, चुनाव चिन्ह सूर्य
अस्ट्रेलियामा हुने विद्यार्थीलाई आयो यस्तो खबर ! आब काम गर्ने अबधि कटौती हुने ! पढ्नुहोस
दैलादैलामा पिरती साट्दै ६९ वर्षीय हिमकान्त गन्धर्व
सिन्धुपाल्चोकमा भएको दुर्घटनामा परि ४ जनाको मृत्यु